Akhriso Qodabadii kasoo Baxey Shirkii Brussels oo ku Turjuman Afka Hooyo ee Soomaalida. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
OGEYSIISKA IYO IIDHEHYADA
Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada
WARSOM.COM – Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Xubnaha Barlamaanka Aqalka Sare oo Maanta Jubaland Lasoo Gaban gabeeyey 4tii…
Xoghayihii Ururka Saxafiyiinta SJS Cabdalla Muumin oo Maamulka Hirshabeele Xabsiga Dhigeen.
Soomaalida Ku Nool Dalka UK oo Cabsi Lasoo Daristey kadib Dilka…
Dawladda Kenya oo Mar kale Sheegtay in aysan u Ogolaan doonin…
Hoggaamiyaha Koox Burcad Soomaali ah oo Dawladda Denmark Sheegtay in ay…
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Akhriso Qodabadii kasoo Baxey Shirkii Brussels oo ku Turjuman Afka Hooyo ee...
Akhriso Qodabadii kasoo Baxey Shirkii Brussels oo ku Turjuman Afka Hooyo ee Soomaalida.
Wakiilo ka socda 58 waddan iyo 6 urur oo caalami ah ayaa isugu yimid magaalada Brussels 16-kii iyo 17-kii July 2018 si ay uga qaybqaataan Forum 2-aad ee Iskaashatada Soomaaliya (SPF), ka dib markii SPF guulaysanaysay Muqdisho 5-tii December 2017.
Kulanka waxaa furay H.E. Maxamed Cabdullaahi Maxamed, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, oo ay ku wehliyaan H.E Federica Mogherini, Wakiilka Sare ee Ururka Shaqaalaha Arrimaha Dibadda iyo Siyaasadda Amniga, iyo H.E. Margot Wallström, Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Iswiidhan, oo ay wada shaqeeyaan H.E. Smail Chergui, Guddoomiyaha Midowga Afrika ee Nabadda iyo Amniga, H.E. Rosemary Di Carlo, Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee Arrimaha Siyaasadda, H.E. Hafez Ghanem, Madaxweyne ku xigeenka Africa ee Baanka Adduunka, iyo Lindy Cameron, Agaasimaha Guud, Barnaamijyada Dalka, Waaxda Horumarinta Caalamiga ah ee Boqortooyada Ingiriiska.
Soomaliya waxay ku jirtaa xeelad kor u dhaafsiisan waxayna horumar ka sameysay goobo muhiim ah inkastoo caqabado aan caadi ahayn. Dib-u-heshiisiinta Soomaalida dhexdeeda, xasiloonida iyo amniga, kobaca dhaqaalaha iyo barwaaqada iyada oo aan musuqmaasuq ahayn, iyo matalaad loo siman yahay ayaa ah hadafyada loogu talagalay haweenka, ragga iyo carruurta Soomaaliyeed. Waxaan ku ammaaneynaa horumarka laga gaaray sidii loo gaari lahaa tan iyo doorashadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo aqoonsanaa dadaalada Dowladda Federaalka Soomaaliya (FGS), Dawladaha xubinta ka ah Federaalka (FMS), Maamulka Gobolka Banaadir (BRA), Baarlamaanka, Diinta maamulka, qaybta ganacsiga iyo muwaadiniin badan oo Soomaali ah iyo sidoo kale kooxaha bulshada. Hoggaaminta Soomaaliya iyo midnimada ujeedadu waxay fure u tahay in lagu gaaro ujeedooyinkaas, iyada oo ay weheliso taageero joogta ah, waqtigeeda, iyo taageerada caalamiga ah, dhammaanba maskax ahaanshaha xisaabtan.
Si kastaba ha ahaatee, horumarka Soomaaliya lama qaadi karo. Awoodaha hay’adeed waxaa loo baahan yahay in la xoojiyo, iyo sidoo kale hababka xisaabtanka loo baahan yahay ee horay u maraya horumarka muddada-dheer. Waxaan aqoonsanahay halista keeni karta horumarka. Xagjirnimada joogtada ah, xagjirnimada rabshadaha, isbedelka cimilada, tartan la’aanta awoodda iyo kheyraadka, la’aanta caddaaladda iyo musuqmaasuqa ayaa halis ku noqon kara dhammaan Soomaalida. Waxaan dadaal u gali doonnaa dadaal aan ku ogaanno oo looga hortago kuwa raadinaya in ay carqaladeeyaan horumarka Soomaaliya ee dib-u-heshiisiinta, nabadda iyo barwaaqada.
Waxaan soo dhaweyneynaa heshiiska siyaasadeed ee ka dhexeeya guddiga FGS iyo FMS taas oo u sahlaysa qaabeynta qoritaanka, wadatashiga iyo marinka sharciyada doorashooyinka ee sanadka 2018. Tani waxay noqon doontaa tallaabo weyn oo ku wajahan hirgelinta doorasho taariikhi ah oo hal-doorasho ah 2020-ka markii ugu horreysay tan iyo 1969-kii. Waxaan xoogga saareynaa in Soomaaliya ay u baahan tahay dastuur dhameystiran oo la ansaxiyay oo bixinaya qaab siyaasadeed oo joogto ah oo dalka loogu talagalay.
Waxaan sidoo kale soo dhaweyneynaa go’aanka Golaha Shirarka Amniga Qaranka ee ku saabsan wadaagista kheyraadka, isdhexgalka ciidamada ammaanka iyo Qorshaha Kala-guurka. Waxaan sidoo kale soo dhoweyneynaa ansaxinta qorshahan ay soo saareen Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika iyo ballan qaadka hirgelintiisa, sida lagu qeexay warbixinteeda 27 June 2018.
Waxaan u tixgelineynaa AMISOM iyo Ciidammada iyo Wadamada Bileyska. Waxaannu ku faraxsannahay balanqaadka ay gundhig u yihiin horumarka Soomaaliya. Joogitaanka AMISOM waa mid muhiim u ah Soomaaliya si ay u horumariso awooddeeda si ay si tartiib tartiib ah u qaadato mas’uuliyadda ammaanka iyo sidoo kale habka siyaasadeed iyo xasilinta Soomaaliya.
Waan ka xishooneynaa oo ka qoomameynaynaa in lumiyo nolol aan waxba galabsan sababtoo ah weerarrada sii socota ee kooxaha xagjirka ah iyo sidoo kale colaadaha hubeysan ee gobolka iyo kuwa gudaha. Waxaanu ku midaysanahay go’aamadayada la dagaallanka argagixisada, ee ma aha oo kaliya xoogagga ammaanka xirfadlaha ah laakiin iyada oo loo marayo hab dhamaystiran oo ku saabsan ammaanka. Tani waxaa ka mid ah wax ka qabashada sababaha aasaasiga ah ee argagixisada iyada oo loo marayo xoojinta xukunka sharciga iyo maamulka caddaaladda, ilaalinta xuquuqda aadanaha, xoojinta maamulka, bixinta doorashooyin bulsho iyo dhaqaale oo loogu talagalay dhalinyarada loola jeedo, iyo kor u qaadista dib-u-heshiisiinta.
FGS waxay samaysay horumar aad u heer sareeya oo lagu gaarayo helitaanka gargaarka deynta ee Soomaaliya siinaya fursada helitaanka maalgalinta caalamiga ah iyo maaliyad dhaqaale oo kordhay. Heshiisyada wada-hawlgalayaasha dakhliga waxay labaduba adkeyn doonaan mashruuca federaalka ah iyo kor u qaadista dakhliga si cad loogu heli karo Soomaaliya iyo muwaadiniinteeda. Jiilka iyo qaybinta dakhliga waa in ay la kulmaan heerka ugu sarreeya xisaabtanka.
Waxaan soo dhoweyneynaa tallaabooyinka la qaaday si looga hortago in abaarihii abaartii la gaarsiiyo 2017 iyo dhiiri galiya wada-hawlgalayaasha in ay wax ka qabtaan baahida bani’aadamnimada ee hadda Soomaaliya, sida lagu sheegay Qorshaha Waxqabadka Bani’aadamnimada ee 2018. Waxaan sidoo kale soo dhoweyneynaa hawlaha firfircoon ee lagu fulinayo samaynta qaab-dhismeedka “Resilience and Recovery Framework” (RRF) iyo dhiirigelinta ballaaran ee ka-qaybgalka qaab-dhismeedkan oo hoos imaanaya hoggaanka FGS, oo leh FMS adag iyo ka qaybgalka BRA.
Waxaan dib u xaqiijinaynaa madax-bannaanida, geesinimada dhulka iyo midnimada Soomaaliya, waxaana hoosta ka xariiqaya muhiimada ay leedahay in laga shaqeeyo sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka xasaasiga ah ee dhibaatooyinka gobolka iyo khilaafaadka ka imaanaya soo deynta soomaaliya. Waxaan soo dhoweyneynaa wadashaqeynta wanaagsan ee ka dhaxaysa Dawlad-goboleedyada, waxaanad ugu baaqaysaa dhammaan waddamada in ay xaqiijiyaan taageerada ay u hayaan Soomaaliya waxay dhiirigelisaa midnimada iyo dib-u-heshiisiinta bulshadeeda.
Waxaan soo dhoweyneynaa ballanqaadka Soomaaliya, oo uu hoggaaminayo H.E. Madaxwayne Maxamed Cabdullaahi Maxamed, si uu u qabto doorasho guud oo caalami ah sannadka 2020-ka. Waxaan ku ammaaneynaa FGS sidii siyaasad loo dhan yahay loo dejin lahaa qorshaha dib-u-habeeynta ee ku wajahan Fedaraalka iyo Dib-u-eegista Dastuurka iyada oo lagu muujiyey siyaasad-dejinta siyaasadeed ee loo dhan yahay ee loo dhan yahay. Waxaan ugu baaqeynaa waaxda fulinta iyo sharci-dejinta si ay u daboolaan ballanqaadkooda ku aaddan in ay dejiyaan sharciyo u hogaansamaya habka loo hirgeliyo taariikh-qof-qof-qof oo mid ah oo isku daya in uu fahmo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. Waxaan ku muujineynaa balanqaadkayaga ku aaddan hirgelintiisa oo ah mid isku mid ah.
Waxaan u hambalyeynaynaa Madaxweynaha iyo hoggaamiyeyaasha Soomaaliya labadaba heer Federaal iyo FMS si ay u muujiyaan waddo ay ku aqoonsanayaan dastuurka ku meel gaarka ah ee dammaanad-qaadka ah ee hal qof oo kaliya ah, sida ku cad Dastuurka Ku-meelgaarka ah ee Somaliya. Hannaankan macne leh waa in lagu dhiirigeliyaa oo lagu taageeraa si loo hubiyo in la caddeeyo dhammaan arrimaha taagan, marinka sharci-dejinta ee Baarlamaanka illaa December 2018, diiwaangelinta sii socoshada xisbiyada siyaasadeed, dhammaystirida wax ka beddelka dastuurka ee la xidhiidha, wax ka beddelidda sharciga xisbiyada siyaasadda, ilaalinta isdhexgalka, gaar ahaan marka la eego hubinta ka qaybgalka siman iyo matalaadda haweenka ee go’aan qaadashada, iyo sidoo kale barokacayaasha, dhalinyarada, beelaha laga tirada badan yahay iyo kooxo aan faa’iido lahayn.
Waxaan taageereynaa FGS iyo dadaalka Baarlamaanka in ay si wadajir ah u wada shaqeeyaan si loo xaqiijiyo hirgelinta guulaha siyaasadeed ee ku salaysan xisbiyada siyaasadeed, oo ay ku jiraan iyada oo loo marayo qodobbo ku habboon qodobada FMS ee Dastuurka Federaalka.
Waxaan ku boorinaynaa dhammaan shariikyada iyo FGS sidii loo hubin lahaa khayraadka nidaamka doorashooyinka, heerarka Federaalka iyo FMS, loo wanaajiyey waqtigooda, waxayna ku saleysan yihiin heshiiska aasaasiga ah ee siyaasadeed ee lagama maarmaanka u ah si loo hubiyo in si buuxda, bilaash ah, waxaan ku baaqeynaa Guddiga Qaran ee Madax-bannaan ee Doorashooyinka (NIEC) si loo soo bandhigo qorshe cad oo doorashooyin ah, oo ay ku jiraan diiwaangelinta cod-bixiyayaasha.
Sidoo kale waxaan ugu baaqeynaa dhamaanba FMS in ay qabtaan doorashadooda si waafaqsan xadka xadidan ee dastuurka.
Waxaa lagu dhiirigelinayaa abuurista Guddiga Farsamada Doodda Federaaliga ee Federaalka (FNTC) oo loo xilsaaray in lagu xoojiyo wada xaajoodyada ku saabsan tiirarka aasaasiga ah ee xasilinta muddada dheer oo ay ku jiraan qaabka doorashada, wadaagista khayraadka iyo qoondaynta awoodaha, si ay u taageeraan heshiisyada siyaasadeed ee heer hoggaamineed . Heshiisyadan siyaasadeed waxay u baahan doonaan inay ka muuqdaan qoraalka dastuurka iyo qaab-dhismeedka sharciga.
Waxaan soo dhaweynaynaa Shirweynaha Qaran ee Dastuurka Soomaaliyeed ee lagu qabtay Muqdisho 13-15 Maajo 2018, taas oo dejisa jaantuska iyo jaangooyooyinka hay’adaha dastuuriga ah ee waajibka ah in ay dib u eegaan oo ay mudnaanta siiyaan waxqabadyada muhiimka ah iyo sidoo kale xilliyada loo baahan yahay dhammaystirka Dib-u-eegista Dastuurka Habka (CRP).
Waxaan aqoonsanahay in lixda bilood ee soo socota ay muhiim u tahay dhamaystirka CRP. Waxaan taageersanahay go’aanka FGS ee ah in la dedejiyo go’aanka siyaasadeed ee lagama maarmaanka u ah sidii loo dejin lahaa dhammaan su’aalaha haray, oo ay ku jiraan qaabeynta FMS iyo Golaha Ammaanka Qaranka, kheyraadka iyo awoodda wadaagga ee u dhaxeeya FGS iyo FMS, federaalka maaliyadeed, qoondaynta mas’uuliyadaha ammaanka iyo qaybaha caddaaladda, xoojinta xukunka sharciga, nidaamka wakiil siyaasadeed, iyo hirgelinta qaab lagu heshiiyey, daahfureed, iyo mid lagu kalsoonaan karo. Waxaan sidoo kale ku baaqaynaa in la sameeyo hannaan lagu xallinayo arrimaha dastuuriga ah, sameynta Maxkamadda Dastuuriga ah iyo hirgelinta Guddiga Adeegga Garsoorka.
Waxaan ku ammaaneynaa horumarka la gaaray ee la gaaray si loo horumariyo dib-u-heshiisiin qaran waxaana rajeyneynaa dhamaystirka Qaab-dhismeedka Dib-u-heshiisiinta Qaranka dhammaadka 2018, si la mid ah geedi socodka wadahadalka si looga hadlo khilaafaadka mudnaanta leh. Waxaan hoosta ka xariiqeynaa baahida loo qabo wadahadalka, nabdoonaanta iyo dib-u-heshiisiinta dhammaan Soomaaliya, iyo qodobbo gaar ah oo lagu beegsanayo dastuurka si ay u xoojiyaan una fududeeyaan horumarinta haweenka iyo sidoo kale carruurta, dhalinyarada, beelaha laga tirada badan yahay, iyo kooxo aan faa’iido lahayn helitaanka caddaaladda, waxbarashada, caafimaadka, amniga, iyo dib u soo kabashada dhaqaalaha.
Iyadoo la tixgelinayo muhiimada xasilinta siyaasadda, iyo in la xaqiijiyo isticmaalka hufnaanta iyo la xisaabtanka khayraadka dadweynaha, waxaan ku taageernaa Soomaaliya dadaalkeeda joogtada ah ee lagu xakameynayo musuqmaasuqa, kor u qaadida daahfurnaanta, iyo dhisidda jawi awood u leh hay’adaha la xisaabtamaya, hufan oo hufan iyo hababka heerarka kala duwan. Waxaan ku dhiirigelinaynaa hay’adaha sharci dajinta iyo fulinta inay dedejiyaan dadaalka ah in la helo tallaabooyin muuqda oo joogto ah si loo ilaaliyo loona ballaadhiyo sharafta iyo xisaabtanka maamulka miisaaniyadda iyo ilaha dhaqaalaha iyo sidoo kale si loo horumariyo qaabeynta sharciga iyo hay’adaha si loo xakameeyo musuqmaasuqa, oo ay ku jiraan xawaaraynta Qaadashada Sharciga Guddiga La Dagaalanka Musuqmaasuqa. Waxaan ugu baaqeynaa dhammaan wada-hawlgalayaasha iyo FGS inay taageeraan dadaalladan oo ay hubiyaan khayraadka lagama maarmaanka ah.
Waxaan si qoto dheer uga hadalnay khilaafka ka jira gobolka Tukaraq ee gobolka Sool. Waxaan ugu baaqeynaa labada maamul ee Somaliland iyo Puntland in ay si deg deg ah u joojiyaan colaadaha, xoogag gooni ah si ay ugu noqdaan xaaladdaha siyaasadeed, in ay galaan wadahadal siyaasadeed ayna u oggolaadaan helitaanka gargaarka bani’aadamnimada.
Waxaan ku boorrineynaa DFS iyo maamulka Somaliland in ay dib u bilaabaan wadahadalka sida ugu dhaqsaha badan si ay u raadsadaan xal nabadeed khilaafkooda. Waxaan ugu baaqeynaa hoggaamiyeyaasha Soomaaliya heerarka federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada inay u muujiyaan niyad jabka.
Waxaan ku ammaaneynaa hoggaanka FGS ee dejinta Qorshaha Kala-guurka iyada oo si dhow ula shaqeyneysa FMS, AMISOM, Ciidan iyo Wadamada Bileyska iyo wadashaqeyn caalami ah. Waxaan soo dhaweyneynaa qaabka guud ee qorshaha kaas oo ku daraya hawlgal shaqo, xarun karti leh iyo waxqabadyo taageeraya si loo gaaro kala-guuris joogto ah.
Waxaan taageersaneynaa istiraatiijiyadda istiraatijiyadeed ee ku jirta Qorshaha Kala-guurka, kaas oo tilmaamaya kala-guurka marka laga hadlayo hay’adaha amniga ee Soomaaliya, oo ay ka mid yihiin meelaha aysan AMISOM joogin, iyo sidoo kale in la kordhiyo mas’uuliyadda AMISOM ee kor u qaadeysa lahaanshaha ammaanka muwaadiniinta. Waxaan ku soo dhaweyneynaa in habkan istaraatiijiyadeed ee kaliya uusan ka mid ahayn hawlaha militariga iyo howlaha booliska, laakiin waxaa hoos u dhigaya sharciga iyo sidoo kale diiradda saaraya dib-u-heshiisiinta, xasilinta, xoojinta maamulka, caddaaladda, ixtiraamka xuquuqda aadanaha, ilaalinta dadka rayidka ah, xuquuqda dumarka iyo sidoo kale ilaalinta carruurta, iyo ka-hortagga iyo ka hortagga xag-jirnimada gacan-ka-hadalka. Waxaan mar kale xaqiijinaynaa balanqaadkayaga in ay tahay hab dhamaystiran oo ku saabsan ammaanka.
Waxaan soo dhaweyneynaa ballan qaadka dhammaan daneeyayaasha in ay dhamaystiraan qorshaha faahfaahsan ee Wajiga 1 ee Qorshaha Kala-guurka, oo ay hoggaaminayso FGS, oo ay weheliso FMS, iyada oo lala kaashanayo AMISOM, P / TCCs iyo la-hawlgalayaasha kale ee muhiimka ah ee caalamiga ah oo daboolaya hawlaha, hay’ad dhisidda awoodda iyo waxqabadyada taageeraya Diisambar 2018. Waxaan soo dhaweynaynaa go’aanka Golaha Amniga Qaranka si loo xoojiyo loona xoojiyo Golaha Gobollada Amniga si loo hubiyo in lagu daro istiraatiijiyado ka qaybqaadasho siyaasadeed iyo bulsho oo ka tarjumaya xaaladaha deegaanka.
Waxaan soo dhoweyneynaa ansixinta Qorshaha Kala-guurka ee Midowga Afrika iyo ballanqaadka Midowga Afrika, AMISOM iyo Wadamada Ciidamada iyo Isu-duwaha Booliiska si loo taageero hirgelinta Qorshaha Kala-guurka. Waxaan soo dhoweyneynaa ballanqaadka AMISOM ee ku aaddan dib-u-hagaajinta qeybaha millatariga iyo qaybaha booliiska iyo joogitaanka sii kordhaya ee qaybteeda rayidka ah ilaa saqafka xaadirka ah ee loo xilsaaray, si loo taageero hirgelinta Qorshaha Kala-guurka, qaybta AMISOM ee hawlgalka, iyo rajada dib u eegista dhamaystiran ee AMISOM . Waxaan sidoo kale rajeyneynaa cusbooneysiinta AMISOM iyo mandaqadda UNSOS ee Golaha Amniga.
Waxaa naloo dhiirrigeliyay dadaalka FGS ee dib-u-habeynta waaxda amniga iyo horumarinta hay’adaha la xisaabtanka, la aqbali karo, la awoodi karo iyo kuwa awoodda u leh oo ay ka mid yihiin dejinta xakamaynta xuquuqda aadanaha iyo hababka xisaabtanka.
Waxaan soo dhaweyneynaa go’aanka Golaha Amniga Qaranka si looga codsado Guddiga Wadajirka Qaranka in ay soo saaraan qorshe hawleed ee isdhexgalka ciidamada gobolka iyada oo la waafajinayo Nabad-galyada Qaranka ee labada bilood ee soo socda. Waxaan ku boorrineynaa FGS iyo FMS inay si dhakhso ah u gaarsiiyaan heshiis ku saabsan qorshahan, oo ay ka mid tahay ku haboonaanta Ciidanka Qaranka ee Soomaaliya, oo bilawga hirgelinta iyada oo aan loo baahnayn hubinta la xisaabtanka iyo u hoggaansamida hannaanka xuquuqda aadanaha iyo heerarka sharciga caalamiga ee bani’aadamnimada.
Waxaan aqoonsanahay in hirgelinta guulaha ah ee Qorshaha Qaranka ee Badbaadada iyo Qorshaha Kala-guurka ay u baahan doonaan rabitaan siyaasadeed iyo taageero adag oo dhinacyada oo dhan ah. Shirarka caadiga ah ee Golaha Amniga Qaranka iyo Golaha Amniga Gobollada, FGS, FMS iyo BRA waxay ku ballanqaadayaan inay qaataan go’aamada siyaasadeed ee lagama maarmaanka u ah inay hirgaliyaan Nashaqada Qaranka ee Nabadgelyada Qaranka, oo ay ka mid yihiin FGS khayraadka Nabadgelyada FSS ee FMS, iyo qeexidda doorarka iyo mas’uuliyadaha ee adeegyada federaalka iyo kan goboleed. Lixda bilood ee soo socota, FGS iyo FMS waxay ku ballanqaadeen inay awood u siinayaan Golaha Ammaanka ee Gobollada, iyadoo hoosta ka xariiqday Xafiiska Nabadgalyada Qaranka, in ay noqoto mid shaqeyneysa, iyo inay kaalin muhiim ah ka qaadato qorsheynta iyo hirgelinta Wajiga 1 ee Qorshaha Kala-guurka, oo ay la socdaan Xafiisyada Amniga Gobollada.
Waxaan aqoonsanahay soo dejinta Ciidanka Xasilinta Muqdisho iyo kaalintooda si ay gacan uga geystaan ​​horumarinta xasiloonida ammaanka Muqdisho. Waxaan ku ammaaneynaa jawaab-celinta degdegga ah ee dhacdooyinka ammaanka ee magaalada. Waxaan soo dhaweyneynaa qaabka ay uga shaqeynayaan wada-shaqaynta muhiimka ah ee daneeyayaasha, la shaqeynta bulshooyinka iyo hirgelinta Qorshaha Xaafadaha Weyn, kuna dhiirigaliso isku xirnaanta Nabadgalyada Qaranka iyo Qorshaha Kala-guurka.
Waxaan hoosta ka xariiqay muhiimada ay leedahay mas’uuliyadda qoondaynta iyo isku-dubaridka dhaqaalaha FGS iyo saaxiibada caalamiga ah si ay u taageeraan qaybta amniga. FGS waxay ku hawlan tahay inay xoojiso maareynta maaliyadda dadweynaha, isla markaana ay isku xiraan kharashaadka qaybta amniga iyo khayraadka iyada oo la raacayo mudnaanta ammaanka ee la isku raacay.
FGS waxay u mahadcelineysaa saaxiibada caalamiga ah ee taageeradooda ku wajahan qaybta amniga. Waxaan ku heshiinay in aan qabanno shir dib-u-eegis ah oo ku saabsan sidii loo xoojin lahaa ammaanka iyada oo la barbar dhigi doonta Golaha Wada-tashiga Soomaaliya ee soo socda sidii lagu heshiiyey shirkii London ee Soomaaliya ee 11-kii Maajo 2017.
Wada-hawlgalayaasha caalamiga ah iyo FGS waxay ku heshiiyeen in ay sii wadaan bixinta taageerada dhaqaale iyo maalka si waafaqsan shuruudaha Qaab-celinta La-xisaabtanka Is-dhex-dhexaadinta iyo isku xirnaanta khayraadka si ay u taageeraan hirgelinta Qorshaha Kala-guurka, oo ka bilaabmaysa mudnaantiisa iyo ku-saleysanaanta kharajka maalgalinta. FGS iyo la-hawlgalayaasha caalamiga ah ayaa isku raacay in la xoojiyo isuduwidda iyada oo loo marayo CAS Strands iyadoo la isticmaalayo habab jira iyo aasaasida Maaliyadda
Farsameynta raadinta ee hoos timaada xafiisyada Xafiiska Nabadgalyada Qaranka iyo Wasaaradda Maaliyadda. Waxaan ugu baaqeynaa dhammaan taageerada ay la socdaan mudnaanaha Qorshaha Kala-guurka iyo Nabad-galyada Qaranka Qaranka.
Waxaan u mahadcelineynaa taageerada maaliyadeed iyo dhaqdhaqaaqa caalamiga ah ee la shaqeeya hay’adaha caalamiga ah ee FGS iyo AMISOM waxayna ku baaqeen dhammaan wada-hawlgalayaasha in ay bixiyaan khayraad muhiim ah oo ku saabsan hirgelinta Qorshaha Kala-guurka si loo sii wado hawlaha amniga ah ee ka socda AMISOM ee ku aaddan ammaanka Soomaaliya hay’adaha. Waxaan ku baaqeynaa bixinta lacag dheeraad ah oo loogu talagalay ciidamada ammaanka Soomaaliya. Waxaan sidoo kale ugu yeeraynaa, iyadoo la isugeynayo wadaagidda culeyska, maalgelin joogta ah iyo deeqo dheeraad ah oo loogu talagalay AMISOM iyada oo loo marayo hababka jira iyo deeqaha labada dhinac si degdeg ah.
Waxaan soo dhaweyneynaa Wasaaradda Amniga Gudaha ee Dhamaystirka Qiimaynta Hawlaha Qorshaha (ORA) ee ciidamada booliska Soomaaliyeed, abuurista hay’ado isku-duwid ah oo ka tirsan Guddiga Booliska iyo heerarka Wasaarada iyo in la bilaabo Barnaamijka Booliska ee Wadajirka ah si loo siiyo Taageerada Caalamiga ah ee Federaalka iyo booliska gobolka oo isku xiran. FGS iyo FMS waxay ku ballanqaadeen in ay gaaraan heshiis ku saabsan arrimaha soo haray ee ku jira Qodobka Caddaaladda iyo Sixitaanka iyo bilaabista hirgelinta, FGS si buuxda u hirgaliso Qorshaha Boliiska Federaalka, iyo FMS si ay u bilaabaan fulinta Qorshayaasha Booliska Gobolka lixda bilood ee soo socota.
Waxaan u tixgelinaynaa ciidamada ammaanka Soomaaliya inay la dagaallamaan Al-Shabaab ayna aqoonsadaan gacan ka geysiga ciidamada xooggan ee arrimahan. Waxaan soo dhaweyneynaa go’aanka Golaha Amniga Qaranka si loogu taageero booliska Gobolka, oo ay ku jirto Darwiish, iyada oo loo baahan yahay sahay daruuri ah, mushaar, tababbar iyo dhisid karti leh oo kuwa ka qayb qaadanaya, oo ay weheliyaan SNA, hawlaha lagula dagaallamayo argagixisada . Waxaan rajeyneynaa inaan dhameystirno ORA-ga ciidamada gobolka iyadoo taageero ka heleysa AMISOM, si loo caawiyo geeddi-socodka isdhexgalka iyada oo waafaqsan xuquuqda aadanaha iyo xeerarka caalamiga ah ee bini’aadanimada.
Waxaan hoosta ka xariiqnay muhiimada qaybta amniga oo dhan kaas oo ka jawaabaya baahida amniga ee haweenka iyo gabdhaha, iyo xaqiijinta ka qaybgalka haweenka hawsha fulinta ee Nabad-galyada Qaranka iyo Qorshaha Kala-guurka. Waxan ugu baaqaynaa dhammaan hay’adaha amniga in ay hirgeliyaan qorshe iyo qorshe hawleed loogu talagalay mabaadii’da jinsiga iyo haweenka, nabadda iyo amniga ee qaybta amniga.
Waxaan soo dhoweyneynaa dhamaystirka qaab-dhismeedka Wasaaradda Difaaca, iyo sidoo kale xeerka anshaxa ee Ciidanka Qaranka Soomaaliya. Waxaan ku ammaaneynaa hirgalinta dib-u-habeeynta mushaaraadka qaranka ee Soomaaliya, oo ay ka mid tahay lacag bixinta mushaharka elektarooniga ah ee Muqdisho, aqoonsana muhiimada ay leedahay dib-u-habeeynta mushaar bixinta si loo ogaado khibrad xirfad leh, oo hufan oo la xisaabtami karo. Waxaan hoosta ka xariiqnay muhiimada dhammaystirka dib-u-habeynta mushaharka ee dhammaan qaybaha SNA, mudnaanta kuwa ku hawlan hawlaha kala-guurka, Gudbinta Hawl-gabka iyo Mashruucyada Hantidhowrka si loo caawiyo xaq-u-xuubinta XDS iyo baahida loo qabo isbedelka dhabta ah ee dhabta ah ee dib-u-habeyn xooggan Ciidamada SNA waa in la dhameeystiro iyada oo la waafajinayo Istaraatiijiyada Difaaca iyo isuduwidda Wasaaradda Gaashaandhigga, oo ay ku jirto taageerada kaabayaasha muhiimka ah si kor loogu qaado amarka iyo xakamaynta ciidamada.
Waxaan xoogga saaraynaa muhiimadda ay leedahay ilaalinta biyaha Soomaaliya ee ammaanka iyo horumarka dhaqaalaha Soomaaliya, waxaanan rajeyneynaa go’aanka Golaha Amniga Qaranka ee ku saabsan kaalinta iyo mas’uuliyadaha ciidamada amniga badaha ee Soomaaliya iyadoo la raacayo Qorshaha Kala-guurka iyo Dhismaha Badbaadada Qaranka.
Waxaan soo dhaweyneynaa guulaha muhiimka ah ee lagu fulinayo hirgelinta FGS ee Ka hortagga iyo Ka-hortagga Xoog-xagjirka Xag-Xaraashka (PCVE) ee ku xiran Qorshaha Kala-guurka iyo Nabad-galyada Qaranka Qaranka, ka-qaybgalka firfircoon ee dhammaan daneeyayaasha, oo ay ku jiraan FMS iyo BRA, bulshada rayidka ah iyo kooxaha dhallinyarada , waana aqoonsanahay horumarkan wanaagsan ee uu ku yimid nidaam kaas oo ah hogaamiye Soomaaliyeed iyo Soomaali. Waxaan ugu baaqeynaa FGS in ay noqdaan qayb ka mid ah qaraarada ku habboon ee la-dagaallanka argagaxisada iyo nidaamyada.
Waxaan soo dhaweyneynaa dadaalka FGS ee ah in ay la shaqeeyaan hoggaamiyeyaasha kooxaha hubeysan iyo dagaalyahanada aan xuddun u ahayn oo si cad u dooranaya waddada nabadda iyo ballanqaadka heshiiska dib-u-heshiisiinta muddada dheer si loo cirib tiro darawallada xagjirnimada. Waxaan ku boorrineynaa FGS in ay sii wadaan taageeradooda, daryeel ku-meel-gaar ah, dib-u-dhiska, sii-deynta iyo dib-u-noqoshada beelaha. Sidaa daraadeed, waxaan ku boorineynaa in fiiro gaar ah la siiyo carruurta iyo dhalinyarada ku lug leh iskahorimaadka hubaysan ee loo baahan yahay in loola dhaqmo sidii dhibbanaha oo loo fidiyo taageero iyo daryeel si ay dib ugu noqdaan bulshada dhexdeeda.
Waxaan hoosta ka xariiqnay muhiimada ay leedahay wax ka qabashada sababaha asaasiga ah ee iskahorimaadka ah oo ay ka mid tahay hirgelinta Qorshaha Kala-guurka, Qaab-dhismeedka Dib-u-heshiisiinta Qaranka, iyo Istaraatiijiyadda Dib-uheshiisiinta Qaranka oo uu hoggaaminayo Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Arrimaha Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta, iyo dhiggooda kale ee ka tirsan Dawladda Federaalka Dawladaha si kor loogu qaado ammaanka bini’aadamka.
Soo Celinta Dhaqaalaha
Waxaan aqoonsaneynaa dadaalka FGS ee dib-u-dhisidda xasillooni-darrada dhaqaale iyada oo loo marayo xoojinta siyaasadda dhaqaalaha, dib-u-dhiska hay’adaha maaliyadeed iyo horumarinta maamulka. Kuwani waa dhammaan arrimaha ugu muhiimsan ee helitaanka gargaarka deynta iyadoo loo marayo habka HIPC.
Waxaan soo dhaweyneynaa guulaha Soomaaliya ee lagu daboolayo shuruudaha Barnaamijka La-socodsiinta Shaqaalaha ee IMF iyo sidoo kale balanqaadkeedii ahaa inay bixiso shuruudaha sii kordhaya ee baahida loo qabo SMP-da saddexaad, sii wadida wadiiqada xiriirka lala leeyahay Hay’adaha Maaliyadeed ee Caalamiga ah iyo Deynta Deynta.
Waxaan soo dhaweyneynaa balanqaadka Dowladda FGS iyo FMS si loo sii wanaajiyo xisaabtanka wadajirka ah ee lala xiriiriyo xisaabinta maaliyadeed ee dawladda dhexe ee FMS, ujeedooyinka horumarinta. Gaar ahaan, waxaan ku ammaaneynaa hawlihii ay qaadeen FNTC waxayna rajeynayaan horumarinta shuruucda iyo mabaadi’da loogu talagalay hagidda xidhiidhada maaliyadeed ee ka dhexeeya.
​​Waxaan sidoo kale ku ammaaneynaa ballanqaadka Bulshada Caalamiga ah ee lagu taageerayo horumarka sii socoshada Soomaaliya ee ku saabsan dib-u-habeeynta dhaqaalaha iyo soo kabashada, oo ay ka mid yihiin barnaamijyo dhowr ah oo labada dhinac ah iyo laba-dhinac ah. Gaar ahaan, waxaan soo dhaweyneynaa balan qaadka hubinta in dhammaan qalabka maaliyadeed ee waaweyn iyo barnaamijyada labada dhinac ee dib-u-habeeynta dhaqaalaha, dhisidda awoodda iyo horumarinta ay si wadajir ah uula socdaan, xoojiyaan nidaam federaal ah oo dhamaystiran, oo waafaqsan Qorshaha Horumarinta Qaranka, Iskaashiga Cusub ee Soomaaliya iyo Qaab-dhismeedka La-xisaabtanka Mutuality.
Waxaan soo dhaweyneynaa heshiiska FGS ee qaab-dhismeedka maaliyadeed oo ku baaqaya miisaaniyad dib-u-eegista isbeddelka qiyaasta dakhliga iyo kharashyada. Tani waxaa ka mid ah joojinta lacagta raasamaalka, iyo sidoo kale bixinta canshuurta shirkadaha iyo iibinta.
Waxaan soo dhaweyneynaa go’aanka FGS ee ku aaddan dib-u-habeynta waaxda dawladeed iyo tan maskaxeed, soo gudbinta Sharciga Adeegyada Dadweynaha ee Golaha Wasiirada iyo soo saarista Hantidhowrka Waxtarka Qalabka ee FGS. Waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa soo bandhigidda
Maareynta Maaliyadda Guud (PFM) Sharciga Baarlamaanka, Waajibaadka
Xakamaynta iyo hirgelinta Nidaamka Xogta Maaliyadeed ee Soomaliya (SFMIS) iyo hubinta in hawlaha ilaalinta ee waajibka ah ay qasab tahay in la yareeyo niyad-jabka.
Waxaan ku ammaaneynaa FGS iyo FMS inay dhawaan gaadheen Heshiisyada Heshiiska Qaybta Batroolka iyo Maareynta Canshuurta iyo Heshiiska Qaybinta Kalluunka ee Ku-meel-gaarka ah. Waxaan ku dhiirigelineynaa dhamaystirka fulinta heshiisyadan, oo ay ka mid yihiin in la gudbiyo sharciyada muhiimka ah. Waxqabadyadani waxay u suurtagelin doonaan dhaqaalaha Soomaaliya in ay soo saaraan dakhliga soo gala, gaar ahaan dakhliga gudaha, waxaan ku dhiirigelineynaa FGS iyo FMS in ay ku lug yeeshaan maareynta daahfurnaanta, xisaabtanka, iyo waarta ee kheyraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya si ay uga faa’iideystaan ​​dhammaan Soomaalida
Waxaan soo dhaweyneynaa FGS diiradda diirada saaridda siyaasadaha dhaqaalaha iyo dib-u-habeeynta, kuwaas oo ay ka mid yihiin horumarinta qorsheynta miisaaniyadda iyo fulinta, dib-u-habeeynta lacagaha, iyo siyaasad dhaqaale oo wax ku ool ah oo ku saabsan qaabka uu ka kooban yahay Wasiirka Maaliyadda. Waxaan ku dhiirigelineynaa FGS iyo FMS inay sii wadaan xoojinta doodan si ay u keenaan midnimo iyo isuduwidda qorshaha dhaqaalaha.
Waxaan taageersaneynaa Baanka Dhexe ee Bankiga Horumarinta Soomaliya ee dib-u-habeeynta lacageed, oo ah mudnaanta sare ee FGS. Waxaan ku heshiineynaa in si guul leh loo bilaabi doono lacagta cusub ee qaranka oo noqon doonta isbedel la taaban karo oo ku saabsan dhinaca lacagta, lebiska nidaamka lacag bixinta ee waddanka, iyo xoojinta midnimada qaranka. Waxaanu ka fiirsan doonaa baahida loo qabo in la maalgeliyo daabacaadda Shilinka Soomaaliga ee Wajiga 1 iyo in lagu martiqaado dhammaan dadka la shaqeeya inay taageeraan tan.
Waxaan ku ammaaneynaa ballanqaadka FGS in ay bixiyaan hufnaan, ganacsi ku salaysan nidaam awood u leh oo taageera qaybta ganacsiga gaarka loo leeyahay, iyada oo qayb ka ah xalka guud ee Soomaaliya ee nabadda, xasilloonida iyo barwaaqada. Waxaan ku ammaaneynaa ballanqaadkii cusbooneysiinta ee hay’adda FGS iyo qaybta ganacsiga gaarka ah si loo dhiso guusha laga gaaro taariikhda wada-xaajoodka dadweynaha iyo khaaska ah (PPD), gaar ahaan horumarinta aragtida la wadaago ee qaybaha muhiimka ah (tamarta, maaliyadda, isgaadhsiinta) iyo fidinta suuqyada caalamiga ah. Waxaan ku ammaaneynaa saxiixidda sharciga ee Xeerka Isgaarsiinta Qaranka iyo abuurista Wakaaladda Isgaarsiinta Qaranka.
FGS, deeq-bixiyeyaasha iyo qaybaha gaarka loo leeyahay waxay aqoonsadaan doorka Hay’adaha Horumarinta Maaliyadeed (DFI) ay ka ciyaari karaan taageeridda dib-u-dhiska iyo dib-u-soo-kabashada Soomaaliya, waxayna ballan-qaadeen inay ka shaqeeyaan nidaamyada aasaasiga ah iyo in la sugo maalgelinta DFI, iyada oo si cad loo fahmayo waqtiga, fursado iyo halis. Waxaan rajeyneynaa inaan xoojino wada-shaqeynta Soomaalida ee DFI ka hor inta aan la gaarin SPF soo socda.
Waxaan aqoonsannahay in ficil la isku daro si loo dhiirigeliyo horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha oo sii socota iyada oo abuuraysa fursado shaqo oo macquul ah oo loo dhan yahay ragga iyo haweenka, gaar ahaan dhalinyarada iyo kooxaha laga tirada badan yahay ee Soomaaliya. Marka la eego arrimahan, waxaan soo dhaweyneynaa go’aanka lagu horumarinayo Qorshaha Horumarinta Qaran cusub oo ah dukumiintiga istaraatiijiga ah ee lagu hormarinayo ujeedadaas Waxaan ku nuuxnuuxsaneynaa sugitaanka maalgalinta joogtada ah ee adeegga bulshada sida caafimaadka, nafaqada iyo waxbarashada, iyo maareynta biyaha iyo qeybinta biyaha, dhammaan qaybaha muhiimka ah ee lagu kobcinayo horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha iyo dhisidda adkeysiga, iyo sidoo kale sugnaanta cuntada iyo qaybaha wax soosaaraya . mudnaansiinta qorshaynta kaabayaasha ku salaysan caddaynta
Nabadgelyada iyo horumarka waara ee Soomaaliya waxay ku tiirsan yihiin mashiinka horumarka, taas oo ah dad iyo gaar ahaan dhalinyarada. Waxbarashada carruurta iyo dhallinyarada ayaa ah maalgashi lagama maarmaan ah si loo xaqiijiyo dadka wax akhriska ah ee leh xirfadaha farsamooyinka iyo xirfadaha farsamada ah ee lagu xaqiijinayo Qorshaha Horumarinta Qaran ee Soomaaliya, waxaanan ku ballanqaadaynaa inaan qabanno dhacdo gaar ah oo ku saabsan waxbarashada.
Waxaan ku ammaaneynaa dhammaan dadaallada FGS, FMS iyo beesha caalamka inay abuuraan fursado dhallinyaro Soomaaliyeed ah si ay u helaan waxbarasho iyo shaqo helitaan. Waxaan aqoonsanahay muhiimada Siyaasadda Dhallinyarada Qaranka iyo ballanqaadka joogtada ah ee FGS, FMS iyo BRA labadaba si loo dhaliyo dhalinyarada soomaaliyeed, dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba. Waxaan ballanqaadeynaa in aan maalgelin ku sameyno dhallinyarada iyada oo ujeedadu tahay in la keeno faa’idooyin faa’iido leh oo ku wajahan dadka dhallinyarada ah iyo jiilalka mustaqbalka Waxaan ku heshiineynaa inaan dhallinyarada, gabdhaha iyo wiilkaba u xoojinno in ay ka qayb qaataan nolosha siyaasadeed, dhaqaale iyo bulshada, iyagoo isku qiimo ahaan u leh awoodooda buuxda ee wakiillada isbeddelka.
Waxaan rajeyneynaa soo bandhigidda Vision 2040 oo ah aragtida istiraatiijiyadeed ee muddada fog ah ee dib-u-kabashada, dib-u-dhiska, iyo adkeysiga waxaanan soo dhaweyneynaa isbeddelka ku-meel-gaadhka ah ee lagu joojinayo dhibaatooyinka bani’aadamnimada iyada oo loo marayo qiimeynta Abaarta Abaarta ee Dowladda iyo RRF . Waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa aasaasida Golaha Dhaqaalaha Qaranka kaas oo bixin doona siyaasad isku dhafan oo joogto ah oo ku saabsan horumarinta dhaqaalaha.
Badbaadinta, Soo-kabashada, iyo Gargaarka Bini’aadminimo
Waxaan xusuusnahay in dhammaan Soomaalida ay la kulmaan halista ah abaaraha mustaqbalka, daadadka, cudurada iyo iskahorimaadka iyo in adkeysiga la yareeyey sababtoo ah soo noqnoqoshadooda soo noqnoqonaya iyo ka horjeeda soo noq-noqoshada naxdintaas.
Waxaan aqoonsaneynaa dadaalka aadka u xoogan ee FGS, FMS, Soomaalida gudaha, beesha gaarka ah iyo beesha caalamka in ay abaaro macluul ka dhacda Soomaaliya sanadka 2017. Waxaan sidoo kale aqoonsanahay inkasta oo horumarinta xaaladaha bani’aadamnimada ay weli jiraan 5.4 milyan oo qof Soomaaliya waxay u baahan tahay gargaar bini’aadanimo, oo ay ku jiraan 2.5 milyan oo u baahan gargaar degdeg ah si ay u daboolaan baahiyahooda cunto maalmeedka caadiga ah. Waxaa sidoo kale jira 2.6 milyan oo qof oo gudaha ku barokacay oo u baahan gargaarro iyo badbaadin kala duwan, kuwaas oo intooda badan ay halis ugu jiraan barakac dheeraad ah oo ay ugu wacan tahay guuritaan khasab ah. Dadweynaha ku nool daafaha Soomaaliya, kuwaas oo la kulmay dhibaatooyinka abaarta iyo khasaarooyinka, waxay sidoo kale u baahan yihiin gargaar deg-deg ah si ay dib-u-dhistaan ​​noloshooda iyo noloshooda.
Waxaan cadeyneynaa sida aan uga go’anahay ilaalinta Sharciga Caalamiga ah ee Bani’aadamnimada, Xeerarka Bani’aadamnimada, Sharciga Qaxoontiga, Sharciga Xuquuqda Aadanaha iyo ilaalinta dadka rayidka ah, gaar ahaan haweenka iyo carruurta, dhammaan dhulka iyo dhammaan kooxaha hubaysan ee gacanta ku haya iyo ilaalinta haweenka iyo gabdhaha rabshadaha ku salaysan jinsiga, gaar ahaan kufsiga iyo noocyada kale ee xadgudubka galmada, xaaladaha dagaal hubaysan.
Waxa kale oo aanu ka go’anahay in aan taageerno oo aan ku xoojinno shaqada NGO-yada si loo gaarsiiyo adeegyada ay la socdaan mudnaanta qaybaha iyo siyaasadaha iyo kormeerka FGS, iyada oo loo marayo hufnaanta iyo wadaagida xogta, horumarinta bani’aadamnimada bani’aadamnimada, adkeysiga iyo qorshayaasha horumarinta; iyo sahaminta siyaabo cusub oo loola shaqeeyo dhammaan jaaliyadaha Soomaalida ah, oo ay ku jiraan qaybaha gaarka loo leeyahay ee Soomaaliyeed, hay’adaha samafalka ee maxalliga ah iyo bulshada iyo hay’adaha degaanka.
Waxaan ku ammaaneynaa balanqaadka Dowladda FGS, FMS, iyo BRA in ay caddeeyaan oo ay xoojiyaan qaababka isuduwidda qaranka ee maareynta musiibooyinka, adkaysiga iyo soo kabashada, oo ay ku jiraan abuurista Hay’ad Maareyn Masiibo Qaran iyo xoojinta dhismayaasha jira ee ku jira qaabka isuduwidda gargaarka. Marka la eego arrimahan, waxaan soo dhaweyneynaa horumarinta siyaasadda Maareynta Musiibooyinka Qaranka waxayna ku baaqeysaa in si deg deg ah loo fuliyo.
Waxaan aqoonsanaa caqabadaha helitaanka xal waara oo loogu talagalay in ka badan 2.6 milyan oo qof oo ku barakacay gudaha Soomaaliya, iyo 1 milyan oo qaxooti ah oo weli ka baxsan Soomaaliya, oo ku amaanay FGS, FMS iyo BRA inay wax ka qabtaan barakaca iyada oo loo marayo dhisidda adkeysi dhamaystiran iyo horumarin sida ku cad Qorshaha Horumarinta Qaranka iyo RRF, iyo sidoo kale inay amaanaan FGS-da ku ballanqaaday ballan-qaadkooda lagu sameeyay Baaqa iyo Qorshe-hawleedka Nairobi oo la xiriira xal u helidda xal waara qaxootiga Soomaaliyeed iyada oo la ilaalinayo ilaalinta, dhiirigelinta isku-kalsoonaanta iyo abuuritaanka awood bay’ada si nabadgelyo leh oo dib-u-noqoshada ah iyo dib-u-noqoshada dib u noqoshada
Waan ka mahadcelineynaa tallaabooyinka ay qaadeen Soomaaliya iyo la-hawlgalayaasheeda si loo xoojiyo hababka isuduwidda ee xalalka joogtada ah ee bara-kaca iyo isku-duwidda iyo isku-duwidda qorshooyinka iyo qorshayaasha la xiriira, oo ay ka mid yihiin Qorshaha Tallaabada Qaranka, iyo in la dedejiyo qorshahaas gaar ahaan furaha aagagga soo noqoshada iyo barakaca.
Waxaannu soo dhaweynaynaa ballanqaadyada ku-meel-gaadhka ah ee FGS ujeedada qorshaha iyo xeer-dejinta ee ku saabsan barokacayaasha iyo xalalka muddada dheer iyo qorshayaashooda si loo hubiyo i) Tilmaamaha Qaran ee Ka Hortagga Qaran, ii) Siyaasadda Qaran ee Dib-u-Celinta Qaxootiga iyo Dadka Gudaha Ku Barokacay, iii) Guriyeynta, iyo xeerka ku-meelgaarka ah ee ku-meel-gaadhka ah iyo waqtiga gaarka ah iyo iv) Sharciga Qaxootigu waxaa la aqbalaa laba iyo tobanka bilood ee soo socda.
Waxaan ku ammaaneynaa go’aanka FGS ee lagu ansaxinayo Heshiiska Midowga Afrika ee 2009ka ee ku saabsan ilaalinta iyo caawimaadda dadka gudaha ku barokacay ee Afrika (Kampala Convention), Heshiiska 1954 ee la xidhiidha Tirada dadka aan lahayn dakhliga, iyo Heshiiskii 1961 ee ku saabsan Dhimista Waddanimada .
Waxaan sidoo kale aqoonsannahay in ay muhiim tahay in la sii wado wax ka qabashada baahiyaha bani’aadamnimada ee ba’an iyo xaqiijinta ilaalinta dadka rayidka ah iyada oo la raacayo Qorshaha Waxqabadka Bani’aadamnimada ee ah kan ugu weyn ee gaari doona bixinta gargaarka bani’aadamnimada ee Soomaaliya. Waxaan sidoo kale ballanqaadnaa inaan hagaajinno dhammaystirka u dhaxeeya maalgashiga bani’aadamnimada iyo horumarinta horumarinta kuwaas oo kor u qaadaya soo kabashada, xalalka joogtada ah iyo adkeysiga iyo isku xirnaanta Qorshaha Horumarinta Qaranka iyo RRF.
Waxaan soo dhaweyneynaa go’aanka FGS ee wax looga qabanayo qaar ka mid ah sababaha asaasiga ah ee masiibooyinka bani’aadamnimada iyada oo loo marayo RRF cusub. Qorshaha Horumarinta Qaranka ee Qorshaha Horumarinta Qaranka, RRF wuxuu horay u sii wadi doonaa dedaalkiisa si loo jebiyo wareegga shoogga iyo wax ku oolka si wax ku ool ah, si loo ilaaliyo loona hagaajiyo adkaysiga dhammaan qoysaska Soomaaliyeed, beelaha iyo hay’adaha. Waxaan rajeyneynaa dhammaystirka iyo hirgelinta degdega ah ee aragtida istraatiijiga ah iyo soo dhaweynta FGS rabitaanka ah in ay qabato dhacdo dhinaca RRF inta lagu jiro Golaha Guud ee Qaramada Midoobay si loo sii xoojiyo iskaashiga iyo xaqiijinta habka dhameystiran, isku xirnaanta iyo isku xirnaanta.
Jinsiga iyo Xuquuqda Aadanaha
Waxaan aqoonsannahay ballanqaadka sii socda ee FGS, FMS iyo BRA si loo wanaajiyo matalaadda, ka mid noqoshada iyo ka qaybgalka haweenka ee arrimaha bulshada iyo siyaasadda, oo ay ka mid yihiin doorka hoggaaminta. Waxaan ku boorineynaa hoggaaminta Soomaaliya in ay ilaaliso shuruucda dastuuriga ah ee ku saleysan matalaadda, ka qaybqaadashada iyo ka mid noqoshada haweenka, gaar ahaan hogaaminta iyo go’aan qaadashada doorashooyinka guud ee la doorto iyo adeegga madaniga ah iyada oo loo marayo dib-u-eegista dastuurka iyo geeddi-socodka siyaasadeed iyo sharci ee socda.
Waxaan ku dhiirrigelineynaa FGS in ay dedejiyaan geeddi-socodka qabyo-gelinta Heshiiska Dhammaan Noocyada Takoorka ee Dumarka (CEDAW) oo ku booriyay FGS iyo la-hawlgalayaasha caalamiga ah ee Soomaaliya inay hubiyaan in ay sii wadaan hoggaankooda iyo helitaanka ilo ku filan si ay si buuxda ugu yeeshaan qodobbada CEDAW iyo in la xaqiijiyo ajendaha Haweenka, Nabadda iyo Amniga.
Waxaan aqoonsanaa guulaha marxaladaha koowaad ee hannaanka dejinta Guddiga Xuquuqda Aadanaha ee Madaxbanaan. Waxaan ku ammaaneynaa dhammaan nidaamka xulashada hufnaanta, dhexdhexaadnimada iyo dhexdhexaadnimada, taasoo keentay magacaabidda sagaal xubnood oo musharax ah. Waxaan ku boorrineynaa FGS in ay dedejiso oo ay dhamaystirto hannaanka dejinta iyo hirgelinta Guddiga Qaran ee Xuquuqda Aadanaha si loo suurtogeliyo dhiirrigelinta xoojinta iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya.
Waxaan xoogga saarnaa muhiimada muhiimka ah ee hubinta xorriyadda hadalka ee dhammaanba iyo in la kobciyo jawi karti leh oo u sahlan warbaahinta madaxbannaan, firfircoon, iyo xirfadeed.
Intaa waxaa dheer, waxaan aqoonsanahay muhiimada ay leedahay hannaankii dhowaan loo dhan yahay ee Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha ee ku saabsan horumarinta Warbixinta Hore ee Dhexe ee Gobolka ee Heshiiska Xuquuqda Carruurta. Waxaan sidoo kale ku ammaaneynaa FGS ee mudnaanta koowaad ee Soomaaliya ee soo saarista Qorshaha Wakaaladda Iinta ee ugu horreysa, oo muujinaya ballanqaadka lagu hagaajinayo fursadaha dadka naafada ah ee Soomaaliya. Waxaan ku dhiirigelineynaa FGS in ay cusboonaysiiso diiradda saarista hirgelinta naafanimada ka hor inta aan la gaarin Shirka Caalamiga ah ee Naafada (Disability Summit) iyo wixii ka dambeeya iyada oo la saxiixayo Axdiga Isbeddelka iyo xaqiijinta in Bulshada Rayaalku ay qayb ka tahay habsami u socodka. Waxaan sii dhiirigelineynaa FGS sidii loo hormarin lahaa caafimaadka maskaxda iyo taageerida nafsaani-bulsho ee dadka maxalliga ah, gaar ahaan haweenka iyo carruurta, ay saameeyeen colaadaha hubaysan.
Waxaan ku dhiirigelineynaa xukuumadda Soomaaliya in ay mudnaanta siiso sharci dejinta iyo in la sameeyo dib-u-habeyn lagu xushmeeyo, ilaaliyo lana horumariyo haweenka iyo gabadha oo dhan ee xuquuqda aadanaha iyo in ay u oggolaadaan waxqabadka, kahortagga iyo ka takhalusida dhammaan noocyada rabshadaha iyo takoorka haweenka iyo gabdhaha. Waannu qiraynaa guulihii dhawaanahan ka soo baxay FGS inay ku ansixiyeen Xeerka Dembiyada Galmada ee heerarka golaha, talaabada koowaad ee ku aaddan dacwad ku ool ah dembiyada galmada iyo dhamaystir la’aanta xaaladahaas.
Waxaan soo dhaweyneynaa casriyeynta casriga ah ee Habdhaqanka Iskudhafka ah oo ay ka go’an tahay horumarinta joogtada ah, hirgelinta iyo kormeerka Habdhaqanka Iskudhafka Mutuality, oo ay ku jirto dib-u-eegista saddex-biloodlaha ah ee Xarunta Horumarinta iyo Dib-u-dhiska Soomaaliya iyo laba sanno marba SPF-yada mustaqbalka. Waxaan aqoonsaneynaa qoraalkani inuu yahay qalab muhiim ah oo lagu hormarinayo xisaabteynta wadajirka ah iyo iskaashigeena kaas oo si cad u qeexaya dhacdooyinka la aqoonsan karo ee loogu talagalay labadaba FGS iyo lamaanayaasha caalamiga ah. Waxaan ku dhiirigelineynaa horumarka adeegga bulshada in la siiyo fiiro cusub oo mustaqbalka Habka Iskudhafka Mutuality iyo sidoo kale SPF ee soo socda.
Waxaan ugu baaqeynaa dhammaan hay’adaha caalamiga ah inay hubiyaan in taageeradooda ay buuxinayaan ujeeddada la sheegay in ay yihiin “Soomaalidu leedahay iyo Soomaalidu” oo ay ka go’an tahay inay ka shaqeeyaan gudaha iyo xoojinta dhismaha gargaarka ee hadda jira ee taageeraya ujeeddadaas. Gaar ahaan, waxaan ugu baaqaynaa dhammaan wada-hawlgalayaasha in ay wadaagaan macluumaadka ku saabsan barnaamijkooda laba-geesoodka ah iyada oo la adeegsanayo golaha isku-duwidda gargaarka ee jira, iyo in la hubiyo in ay buuxiyaan shuruudaha warbixinta socodka gargaarka.
Waxaan mar kale xaqiijineynaa sida ay nooga go’an tahay in aan si wadajir ah ula shaqeyno FGS-ta si isdaba-joog ah, wada-xisaabtan iyo isku-dubbaridan oo xoojiya nidaamyada waddanka ee la jaan qaadaya iyo taageeridda Qorshaha Horumarinta Qaran ee Soomaaliya, si loo helo nabad waarta, nabadgelyo iyo barwaaqo.
Waxaan aqoonsaneynaa talaabooyinka muhiimka ah ee loo qaaday si loogu diyaariyo Qorshaha Horumarinta Qaran ee soo socota kaas oo raadin doona in lagu qeexo koboc aad u fara badan oo xasilan Soomaaliya. Waxan u aragnaa inay tahay arrin muhiim ah oo wax looga qabanayo baahida dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo yareynta saboolnimada iyo nuglaanta.
Waxaan u mahad celineynaa Midowga Yurub iyo Iswiidhan inay marti galiyaan Forum Iskaashiga Soomaaliya ee Brussels
Waxaan ku heshiinay inaan ka soo baxno natiijooyinka Kulankan 3 Bilood gudahood waxaanan bilaabeynaa u diyaargarowga Shirweynaha Iskaashatada Soomaaliya ee soo socda, in la qabto muddo lix bilood ah.
Previous articleShirka Brussels iyo Maalintiisii Labaad oo La Filayo in uu Soo Gaban gaboobo.
Next articleHadal uu Hore ugu Yiri M/weynaha Ruushka M/weyne Trump oo uu ka Laabtey.
I the chairman of the united somali republican party(usrp) my name is ali mohamed nuh(timajilic) lives in mogadisho you can contact me at email:timajilic22@hotmail.com timajilic2@yahoo.com timajilicl0@gmail.com.
Xubnaha Barlamaanka Aqalka Sare oo Maanta Jubaland Lasoo Gaban gabeeyey 4tii Kursi ee ka Harsanaa.
Soomaalida Ku Nool Dalka UK oo Cabsi Lasoo Daristey kadib Dilka Xildhibaan Lagu Tuhunsanyahey Nin Soomaali ah.
© Copyright SOSTEC 2019